ओलीले यस्तो सम्म गर्न खोजे, प्रचण्डले भने –मन लागेको गर्नु ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ओलीले यस्तो सम्म गर्न खोजे, प्रचण्डले भने –मन लागेको गर्नु !
कात्तिक १४ गते, २०७७ - १९:३७
काठमाडौं । एकिकृत र विशाल कम्युनिष्ट पार्टीको परिकल्पनामा एमालेसँग एकता गरेका जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्ड पछिल्लो समय निरिह जस्तै बनेका छन् ।
राजनीतिमा निकै चतुर र क्रमभंग गर्नसक्ने नेताको छवि बनाएका प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति हैरान बनाएका छन् कि प्रचण्ड पछिल्लो समय बालुवाटारमा ओलीसँग भेट्न समेत अनिच्छुक छन् ।
ठाउँ पाउनेबित्तिकै डिलमुनि घचेड्न थालिहाल्ने ओलीको कार्यशैलीसँग हैरान भएका प्रचण्डले केही समयअघि पार्टीको स्थायी समितिबाट निर्णय गराएर आफुले कार्यकारी अध्यक्ष लिनुका साथै सरकारका महत्वपुर्ण निर्णयहरुमा पार्टीको निर्णय हुनुपर्ने सहमति गराए ।
तर ओलीले उही पुरानो रबैया छोडेनन् । झण्डै एक हप्ता बालुवाटारमा प्रचण्डलाई दैनिक तारिख धाउन लगाएका ओलीले आफुखुशी राजदुतहरुको नियुक्तिमात्रै गरेनन्, पार्टीमा सल्लाहा नै नगरी मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा समेत आफु पक्षधरहरुलाई मात्रै समेटे ।
यो विषय सेलाउन नपाउँदै उनले आफु पक्षका नेताहरुमार्फत कर्णाली प्रदेशमा साविक माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेको महेन्द्र शाहीका विरुद्ध संसदिय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाए ।
प्रचण्डले माथिका यि सबै निर्णयहरुमा असहमति जनाएपछि ओलीले प्रचण्डलाई झनै तर्साउने रणनीति अख्तियार गरेको बालुवाटार सुत्रले बतायो ।
मन्त्रि पदसँग लोभिएका साविक माओवादीका टोप बहादुर रायमाझि, हरिबोल गजुरेल र प्रभु शाहलाई साथ लिएर प्रचण्डलाई काउण्टर गर्ने रणनीतिमा ओलीले तयारी गरे । अर्थात रायमाझि, गजुरेल र शाहलाई मन्त्रि बनाउने । तर उनीहरुलाई शर्त थियो–प्रचण्ड क्याम्प छोडेर आफ्नो क्याम्पमा आउनुपर्ने ।
स्रोत भन्छ–तिनैजना नेताहरुले प्रचण्डले नभनेपनि ओली बनाउन तयार भए आफुहरु मन्त्रि बन्न तयार रहेको बताएपछि गत शुक्रबार ओलीले राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाएर र केही मन्त्रालयहरुलाई फुटाएर तिनजना मन्त्रिलाई सपथ ख्वाउने तयारी गरे ।
यो खबर ओली पक्षकै सुवास नेम्वाङ्, विष्णु पौडेल, शंखर पोखरेल लगायतका नेताहरुले थाहा पाए । स्रोत भन्छ –तिनैजना नेताहरुले ओलीलाई यसो गर्न नहुने भन्दै रोके । अर्थमन्त्री समेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले ओलीलाई भेटेर ‘यसो गर्दा दुरी झन बढ्ने र फुटको संघारमा पुग्ने हुँदा आफुले प्रचण्डसँग सल्लाहा गर्ने वातावरण मिलाउन लाग्ने’ भन्दै समय मागे ।
ओलीले ‘लौ त, तपाई मिलाउनुहुन्छ भने म केहिदिन रोकिन्छु नि त !’ भन्दै पौडेलाई प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पठाए ।
उता प्रचण्ड ओलीले आफुपक्षिय नेताहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउन लागेको कुराबाट बेखबर थिएनन् । प्रचण्डले गजुरेल, रायमाझि र शाहलाई बोलाएर आफुसँग रहने कि ओलीसँग जाने कुरा क्लिएर गर्न भनिसकेका थिए ।
ओलीको यस्तो धम्की र कपटीपुर्ण कुरा लिएर पुगेका पौडेलाई प्रचण्डले ‘आफुले थाहा पाइसकेको र जेजे मन लाग्छ गर्नु र परेको बेहोर्नु’ भनेर जवाफ दिए ।
आफुहरु पनि हेरेर र सहेर नबस्ने जवाफ पाएका पौडेलले ओलीसँग नझुक्ने मुडमा रहेको रिपोर्टिङ् बालुवाटारमा गरेपछि ओली यो निर्णय लिनबाट पछि हटेर फकाउने रणनीतिमा हिडेको बताईन्छ ।
प्रचण्डको तयारी–जति हुन्छन् तिनै लिएर ओलीसँग लड्ने
यता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भने साविक माओवादीका नेताहरुलाई ‘कताकता लाग्ने हो लाग्नुस्, म चाहि ओलीसँग लड्छु’ भन्न थालेका छन् ।
हुनपनि गत कात्तिक ४ गतेबाट ओलीसँगको संवादमा समेत प्रचण्ड छैनन् । स्रोत भन्छ– प्रचण्ड आफुसँग भएका र सहमत हुनेजतिलाई लिएर ओली प्रवृतिको विरुद्धमा लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले अल्पमत र बहुमतको हिसाब समेत राखेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार अब प्रचण्डले कुनैपनि प्रस्तावहरु पार्टीका आधिकारिक कमिटि र बैठकहरुमा राख्ने छन् र पक्षविपक्षमा निर्णय गराउने छन् ।
कात्तिक १४ गते, २०७७ - १९:३७ मा प्रकाशित